Fluid Loss nwekwara-OBC-G80S - China Tianjin Oilbayer S & T
Summary OBC-G80S bụ ụdị sulfonic ọmụmụ ọnwụ mmako. Ọ nwere ihe odide ndị dị ka: mgbochi elu okpomọkụ, mgbochi nnu, ngwa ngwa ike mmepe, ole na ole free mmiri. The ngwaahịa bụ ihe kwesịrị ekwesị na-eji dị iche iche iche iche nke mmiri na simenti. Ọ bụkwa a ụdị nile eji ngwaahịa, nke ike-eji dị iche iche iche iche nke ciment slurry na usoro. OBC-G80S bụghị naanị na ọdabara na freshwater cement slurry, ma na ọdabara na mmiri nnu cement slurry. Ọrụ Ọ mbelata ọmụmụ ọnwụ o ...
OBC-G80S bụ ụdị sulfonic ọmụmụ ọnwụ mmako. Ọ nwere ihe odide ndị dị ka: mgbochi elu okpomọkụ, mgbochi nnu, ngwa ngwa ike mmepe, ole na ole free mmiri. The ngwaahịa bụ ihe kwesịrị ekwesị na-eji dị iche iche iche iche nke mmiri na simenti. Ọ bụkwa a ụdị nile eji ngwaahịa, nke ike-eji dị iche iche iche iche nke ciment slurry na usoro. OBC-G80S bụghị naanị na ọdabara na freshwater cement slurry, ma na ọdabara na mmiri nnu cement slurry.
Ọ mbelata ọmụmụ ọnwụ doro anya na. N'ozuzu na-erughị 50ml. Ọ bụrụ na-amụba na onunu ogwu, ọmụmụ na ọnwụ ga na-erughị 30ml.
Irè nnu eguzogide. Ọ ga-eji na jupụta mmiri nnu.
Ndim oge na-abawanye ubé dị ka okpomọkụ na-abawanye na okpomọkụ nso nke 70 90 ℃. Ọ dịghị ihe mmetụta na ike nke ciment nkume.
Ọ bụghị chebaara onunu ogwu, ọ dịghị ọdachi mgbe, nchekwa na iji.
Okpomọkụ: ≤180 ℃ (BHCT).
Nwere ike ikwu onunu ogwu: 0,6 ~ 0,8% (BWOC).
Na ọdabara ụdị ọrụ ọ bụla cement slurry usoro, nke na-dere ọ bụla ọkwa nke mmanụ-ọma cement (kọwara GB10238 ma ọ bụ APISpec10A) na ndị ọzọ nwekwara (dị nnọọ ka sịlịkọn ntụ ntụ, kpafuo chaplet, flyash, bentonite, barite ntụ ntụ na hematite).
White ma ọ bụ ìhè edo edo ike
Fluid ọnwụ (50 ℃, 6.9MPa, 30min), ml
Free mmiri (50 ℃), ml
Mejupụtara nke ciment slurry: SD "G" cement 800g, Fresh mmiri 352g, OBC-G80S 4.8g, OBC-X60L 4G.
Previous: Fluid Loss nwekwara-OBC-G80L
Next: Fechaa Agents-OBC-P62S
Fluid Loss nwekwara-OBC-G80L
Spacers na flushes-OBC-S32S